Myanmar Gays Heaven: KO HTET
စစ်ကိုင်းနင်အနီးတ၀ိုက်သာ လိုးပေးချင်ပါတယ် မြန်မြန်ဆက်သွယ်ပေးကြပါ m2boyman@gmail.com ကိုအပ်လိုက်ပါ ပုံစံမျိုးစုံနော်
Posted by Myanmar Gays Heaven at 8:43 AM
John K May 19, 2014 at 1:53 PM
Nayminthandar21@gmail.com က ယူ့ အနားလေးမှာ
add lastlonglate@gmail.com from mdy
Ph ပို့​ပေးပါလား​mail ထဲကို yelay828@gmail.com ကို မနွဲ့ရင်​မဝရင်​အသက်​၂၃မ​ကျော်​ရင်​စိတ်​ဝင်​စားတယ်​
saiyin gyeit April 11, 2015 at 9:03 AM
ကျော်ကျော် May 23, 2014 at 8:03 AM
ရဲ​လေးလို့​ခေါ်ပါတယ်​။homoတ​ယောက်​နဲ့အတည်​တွဲချင်​ပါတယ်​ရုပ်​ရည်​အသင့်​တင့်​ရှိပြီးမဝရပါဘူးစစ်ကိုင်းနဲ့အနီးတဝိုက်​ဆိုပိုအဆင်​​ပြေပါတယ်​စိတ်​ဝင်​စားရင်​ဆက်​သွယ်​ပါ yelay828@gmail.com ကို
Wechat သုံးလား ကို၇ဲ​လေး woshiwo19287 ပါ wechatid က စစ်​ကိုင်းသားပါပဲ
Anonymous November 23, 2014 at 12:11 AM
ygn က 69 ဆွဲချင်တယ်
sawthetoo@gmail.com ကိုအပ်ပေး အသက်က 20 & ……………… မဝရ ပိန်ပိန် ဆိုရင် ရပြီ
Anonymous August 14, 2014 at 2:26 AM
Anonymous August 14, 2014 at 2:40 AM
Anonymous August 17, 2014 at 12:07 PM
ဖင်​လိုး​ပေးချင်​သူများ​မေးချန်​ထား​ပေးပါ လီးလည်းစုပ်​​ပေးပါ့မယ်​ အ​ခြောက်​မဟုတ်​ပါ
m2boylay@gmail.com March 9, 2015 at 9:18 AM
htay Ye'htoo April 30, 2015 at 9:01 AM
ဖင်​အရမ်းလိုးခံချင်​တယ်​ မန်း​လေးကိုလာခဲ့​လေ ကိုယ်​အားလုံတာဝန်​ယူပါ့မယ်​
Anonymous October 7, 2014 at 11:42 PM
ဖင်​လိုးချင်​တယ်​ မန်​လေးကပါ ၀၉၂၅၉၀၂၈၇၇၈ viberက​နေ ဆက်​သွယ်​ပါ
Yome. Laymha August 18, 2014 at 3:17 PM
စိတ်တူကိုတူ လိုးချင်တယ်09402556578Ygn, mdy!
နေပြည်တော်/တပ်ကုန်းကပါ 09425301542 Top ပါ လီးကြီးသည် ခံချင်ချင်ရင်ဆက်သွယ်ပါ
YGN. Would love to get my lips around that, william.blake41@yahoo.com
sese lay November 18, 2014 at 1:29 AM
sese lay November 18, 2014 at 1:32 AM
royallover22 January 25, 2015 at 12:59 AM
Anonymous January 31, 2015 at 11:20 AM
ခံချင်​တယ်​ဗျာ viberက​ပြောမယ်​ ph​ပေးပါ
Kyaw Thu Soe December 22, 2015 at 5:21 AM
royallover22 February 11, 2015 at 11:12 AM
royallover22 February 18, 2015 at 12:51 AM
Moe Thauk February 24, 2015 at 10:29 AM
crazy man March 10, 2015 at 10:45 AM
Rot Chann May 2, 2015 at 11:07 PM
m2boylay@gmail.com June 21, 2015 at 11:33 PM
လိုးချင်နေတယ် မန်းလေးအနီးတဝိုက်သာ လိုးပေးပါမယ် ဘယ်သူခံမလည်း
Naing Tun June 27, 2015 at 5:37 PM
nyiko July 16, 2015 at 3:46 AM
မင်း ဝဏ္ဏ July 30, 2015 at 6:45 AM
ထိုင်းကပါ ရှိရင်​ဆက်​သွယ်​​ပေးပါ ဖင်​မခံဘူးဖင်​လုပ်​ချင်​တာပါ ဖင်​ကိုလီနဲ့မလုပ်​ချင်​ပါဘူး ခရမ်းသီး or အလျား​ရှေတဲအရာတစ်​ခုခုနဲ့လုပ်​မှာဘာ kokolay55529@gmail.com. ပါ
Anonymous August 9, 2015 at 12:48 AM
tommy sky November 3, 2015 at 3:29 PM
Htin Lin Aung November 13, 2015 at 6:36 AM
Rot Chann December 14, 2015 at 4:45 AM